Antibiotika: fampahalalana ho an'ny antibiotika voajanahary, sns.-BALLYA
Fikarohana haingana Inona no atao hoe terramycin? Famaritana fananana ara-batana sy ara-tsimia tanjona Zava-mahadomelina Farmacokinetics Terramycin Mampiasa Indications Fampiasana Dosage Fampiasana Beterineto Terramycin Side effects 1. Famaritana Terramycin dia takelaka mavo maivana na takelaka mifono siramamy, an'ny tetracyclines, mora levona anaty rano sy asidra. Izy io dia […]
Fikarohana haingana Inona no atao hoe tetracycline? Ny fampiasana tetracycline ho an'ny trondro Tetracycline effects effects Famaranana Inona no atao hoe tetracycline? Ny antibiotika Tetracycline dia derivatives ring naphthacene hydrogenated novokarin'i Actinomycetes. Antibiotika marobe izy ireo izay manakana indrindra ny tsy fitovizan'ny proteinina bakteria. Manana ny vokatry ny bakteria izy ireo ary ahitana karazany 6 ny ankamaroany, dia ny chlortetracycline, oxytetracycline, tetracycline, ary doxycycline, metacycline ary […]
Aprily 15, 2021
Fikarohana haingana Inona no atao hoe menaka tetracycline? Toetoetra-toetra mampiavaka ny farmasia sy toksisolojia Inona no ilana menaka tetracycline? Conjunctivitis Keratitis Blepharitis Trachoma Famaranana Inona ny menaka tetracycline maso? 1. Ireo singa ilaina indrindra amin'ny menaka tetracycline dia ny tetracycline. Ny anarany simika dia: 6-methyl-4- (dimethylamino) -3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a, 5,5a, 6,11,12a-Octahydro -2-tetrabenzamide. Fomban-molecular: C22H24N2O8. Milanja molekular: 444.44. BALLYA dia manome tetracyclines […]
Aprily 12, 2021
Fikarohana haingana Inona no atao hoe nify tetracycline? Pathogenesis Clinical Features Azo atao fotsy ny nifin'ny tetracycline? Fanamboarana kosmetika vaovao resina vaovao Tetracycline dia fanafody ampiasaina hitsaboana aretina mikraoba. Misy vokany ratsy eo amin'ny nifin'ny ankizy izany. Taloha, ny sehatry ny fitsaboana dia tsy nandoa […]
Fikarohana haingana Inona no atao hoe tetracycline? Famaritana Tetracycline kilasy fananana ara-batana sy simika Inona no fampiasana tetracycline? Tantara Mekanisme miady amin'ny bakteria sy ny mekanisma fanoherana Mekanisma fanoherana Tetracycline fototarazon'ny fanoherana Tetracycline effets voka-dratsy 1. Ny famaritana Tetracycline dia fitambarana organika misy […]
Fikarohana haingana Inona no atao hoe doxycycline? Famaritana Function Traits Mekanisma ny hetsika Doxycycline Mampiasa Indications Fampiasana veterinary mampiasa fampandrosoana Doxycycline effets effets voka-dratsy Fampivoarana ny doxycycline ho avy Famaranana Inona ny doxycycline? 1. Famaritana Doxycycline dia karazana tetracyclines, izay afaka mitsabo ny Mycoplasma chlamydia infection. […]
Aprily 3, 2021
Fikarohana haingana Inona no atao hoe aureomycaine? Famaritana famaritana tantara Vokatry ny fivarotam-panafody Fitsipika fototra Aureomycin Mampiasa fambara fampiasana fampiasa Aureomycin ho an'ny fampiasana biby dia famantarana Aureomycine ampiasaina ho toy ny additive feed Aureomycin Side effects effects 1. Famaritana ny endrika simika Aureomycin (chlortetracycline) dia C22H23ClN2O8. Vovoka kristaly volamena mavo volamena […]
Fikarohana haingana Inona no atao hoe ceftiofur? Definition Pharmacodynamics Pharmacokinetics Ceftiofur Mampiasà Indications Fampiasana Dosage Ceftiofur effets secondaires Reaction ratsy 1. Famaritana Ceftiofur dia vovoka mavo mavo. Tsy mety levona anaty rano izy io, tsy mora vaky anaty acétone ary saika tsy vonoina amin'ny etanol. Ceftiofur dia cephalosporin-biby voafaritra fahatelo an'ny synthetic. Cephalosporin antibacterial […]
Inona avy ireo cephalosporins? Cephalosporins dia kilasin'ny antibiotika ampiasain'ny klinika. Toy ny penicillin, antibiotika beta lactam daholo izy ireo. Matetika ny olona dia mizara zavamiaina bitika ho sokajy 8: bakteria, viriosy, holatra, actinomycetes, rickettsiae, mycoplasma, chlamydia, ary spirochetes. Ireo zavamiaina bitika ireo dia mety hahatonga antsika harary amin'ny toe-javatra sasany, fa ny "cephalosporin" dia misy vokany mamono fotsiny […]
Fikarohana haingana Inona no atao hoe cefdinir? Famaritana Vokatry ny fivarotam-panafody Cefdinir Mampiasà Cefdinir Side effects Cefdinir Dosge effects effects 1. Famaritana ny famolavolana molekiola Cefdinir dia C14H13N5O5S2, ary ny anarana simika dia ([6R- [6α, 7β (Z)]] - 7 - [[(2-amino-4-thiazolyl) - (oximino) acetyl] Amino] - 3-vinyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo [4.2.0] okt-2-ene-2-carboxylic acid, ao amin'ny buffer phosphate 0.1mol / L [0.1 Vahaolana kely amin'ny mol / L disodium hydrogen phosphate phosphate -0.1 mol / L potassium dihydrogen phosphate solution (2: 1)], […]
Fikarohana haingana Inona no atao hoe cephalexin? Famaritana Vokatry ny fivarotam-panafody Farmacokinetics Cephalexin dia mampiasa fambara Cephalexin fatra Fampiasana veterinina ny fiasan'ny Cephalexin ny fiatraikany ratsy 1. Famaritana Cephalexin (Cefalexin) dia zava-mahadomelina antibiotika cephalosporin am-bava voalohany-synthetic izay afaka manakana ny tsy fitambaran'ny rindrin'ny sela, mamontsina ny atin'ny sela mandra-pahatongan'ny […]
Fikarohana haingana Inona avy ireo cephalosporins? Ny famaritana tantara dia mampiasa fitsipika momba ny fampiasana cephalosporins Tsy misy fanararaotana Raiso am-bava izany raha vitanao, ary amin'ny intipety amin'ny fitetezana dia tsy azo afangaro amin'ny fanafody hafa Alkoholika na fanafody Vokatry ny cephalosporins nalaina tamin'ny alikaola Réaction Disulfiram Ny zava-mahadomelina izay miteraka fihenan'ny disulfiram Ny elanelana misy eo amin'ny alikaola sy cephalosporin Famaranana […]
1 2 3 ... 6 manaraka »